Trano repurpose: mitondra fiara fitaterana bebe kokoa ary mitarika amin'ity serivisy votoaty haino aman-jery sosialy azo zaraina ity. Martech Zone
Ireo orinasa, anisan'izany ny ahy, dia mamorona atiny vaovao sy mahatalanjona hatrany ho an'ny tranonkalany - ao anatin'izany ny horonan-tsary, podcast, ary lahatsoratra. Na dia mahatalanjona aza ny famoronana, matetika dia misy làlan-dàlana fohy ho an'io atiny io rehefa mandeha ny fotoana… ka ny fiverenana feno amin'ny fampiasam-bola amin'ny atiny dia tsy tena tanteraka.
Iray amin'ireo antony manosika ahy ny mpanjifantsika hieritreritra bebe kokoa amin'ny resaka fampandrosoana a tranomboky atiny noho ny famokarana atiny tsy misy farany. Misy olana hafa koa amin'ny ankamaroan'ny famoronana votoaty, na izany aza… tsy miova fo izahay repurpose ny atiny handefasana valiny fanampiny amin'ny alàlan'ny mpampita vaovao hafa.
Rehefa miara-miasa amin'ny mpanjifa isika dia matetika no mandray lahatsoratra bilaogy malaza ary avy eo dia ataontsika anaty infographic, avy eo infographic ho whitepaper, avy eo whitepaper ho webinar… hatrany hatrany. Mahafinaritra ny fizotrany satria efa fantatsika fa malaza ny atiny… dia mihena ny risika sy ny fandaniana amin'ny famerenana azy. Tsy lazaina intsony fa ny atiny biolojika dia manana ROI lehibe lavitra noho ny tsy maintsy hahazoana fitarihana amin'ny alàlan'ny dokam-barotra.
Saingy… ny fitadiavana fotoana sy talenta hamoronana sy hamerenana ny fananana dia fanamby ho an'ny ekipa marketing rehetra. Alao an-tsaina ange raha manana serivisy afaka mamolavola sy manitatra ny atiny voavoatra amin'ny media sosialy ho anao ianao…
Repurpose House dia serivisy manova ny atiny misy anao, ny horonan-tsarimihetsika, na ny podcast misy anao ho lasa endrika namboarina natao hizarana amin'ny Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, ary LinkedIn.
Ampiarahina amina mpamorona atiny manokana, mpiambina ary mpamandrika media sosialy ianao handefasana horonantsary sy audiogram, sary nalaina ary sary kely namboarina ho an'ny fahana ara-tsosialy, tantara ary Youtube. Endri-javatra ao amin'ny Repurpose House:
Optimization - Ny fananana dia misy soratra sy habe sahaza azy amin'ny sehatra rehetra.
marika - Ny atiny sary sy horonan-tsary dia marika tsy tapaka miaraka amin'ireo modely nifanarahana izay toa mahafinaritra.
Sarany raikitra - vidiny iray, isam-bolana, dia apetraka mifototra amin'ny habetsaky ny atiny tianao havaozina sy halefa.
Fast delivery - mandefasa fangatahana amin'ny 5 hariva ary mahazoa fananana amin'ny maraina!
Midira, manomboha tapakila, omeo info vitsivitsy ny hacker ao aminao, ny rohy mankany amin'ny horonan-tsarinao / feo na hafatra miakatra 100 avy amin'ny lahatsoratra bilaogy, ary azonao atao - azonao atao ny mahazo fananana hatramin'ny 9 isaky ny fangatahana!
Manaova fandaharana Demo momba ny trano miverimberina
Oha-panazavana ohatra ny trano
Ireto misy ohatra tsara ny fomba fampivoaran'ny serivisin'izy ireo atiny miavaka, marika, ary nohatsaraina… ao anatin'izany ny meme video, audiograms, ary sary nalaina sary:
Namboarina avy amin'ny atiny video misy anao, Repurpose House manampy lohateny sy fanazavana azo vakiana (tsara satria maro ny olona no nangina ny volany):
Namboarina avy amin'ny sombin-tsoratra avy amin'ny lahatsoratra bilaogy na lahatsoratra, ireo horonan-tsary ireo dia mahafinaritra amin'ny familiana ny varotra sy ny fitarihana avy amin'ny media sosialy hiverina amin'ny tranokalanao.
Audiograms dia horonantsary novokarina avy amina teny nalaina avy tao amin'ny podcast anao mba hitarika ny olona hisoratra anarana sy hihaino.
Sary nalaina sary
Mamolavola sary tsara amin'ny alàlan'ny teny nalaina avy tamin'ny lahatsoratranao, horonan-tsarinao, na podcast hitondrana fanentanana fanampiny amin'ny alàlan'ny fantsona media sosialy.
Mpanjifa an'ny Repurpose House mahita fiakarana amin'ny session 138% ary mitarika 300%… nefa tsy mandany dolara amin'ny dokam-barotra. Ireo rehetra amin'ny alàlan'ny famerenana amin'ny laoniny ny atiny misy anao sy fizarana azy amin'ny fantsona media sosialy stratejika.
Manomboha amin'ny trano miverimberina
Fampahalalana: mpiara-miasa amiko i Repurpose House.
Tags: audiogramaudiogramsFacebookFacebook Marketingsary nalainaInstagraminstagram marketinghoronan-tsary instagramLinkedInmarketing marketingrepurposerepurpose atinytrano repurposeatiny media sosialysary media sosialyhoronantsary media sosialyTwitterMarketing amin'ny TwitterLahatsoratra VideoYouTubeyoutube marketing